Safer School Construction - The Principles
एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोण: सिद्धांतहरु
सुरक्षित विद्यालय निर्माण को लागि एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण पांच सिद्धांतहरु मा आधारित छन्, जुन ले परियोजना लाई शुरु देखि अन्त्य सम्म मार्गदर्शन गर्दछ। दुई अतिरिक्त राम्रो अभ्यासहरू ले पनि दृष्टिकोण को प्रभाव मा वृद्धि गर्ने सहायता गर्दछ।
सधैं पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्तहरू
१ सुरक्षित विद्यालयहरु को निर्माण र कमजोरहरु लाई बलियो बनाऊने
विद्यालयको रचना र निर्माण विद्यार्थीहरु र कर्मचारीहरु जोगाउन हुनुपर्छ। जब सुविधाहरु असुरक्षित हुन्छन्, तिनीहरूको पहिचान हुनुपर्छ, तिनीहरु लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र बलियो बनाउनु पर्छ । संलग्न सबै मानिसहरू ले लागत र समय को सन्दर्भमा चिन्ता भन्दा सुरक्षा रोज्नुपर्छ। सबैजना निर्माण एक उच्च गुणवत्ता मानक पूरा निश्चित गरेर सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यी गुणस्तर का स्तर बिना हामी जीवन जोखिममा पार्छौं र धन र प्रयास खेर फाल्छौं ।
२ साझेदार भएर कार्य गर
एक समुदायमा आधारित दृष्टिकोण भनेको परियोजना कार्यान्वयनकर्ता (एक विकासकर्ता वा सरकार) र स्थानीय समुदाय बीच एक सम्झौता निर्माण गर्ने बारेमा हो । विकास संगठनहरु र सरकारहरु ले समुदायहरु लाई क्षेत्रीय खतरहरु, जोखिम-प्रतिरोधीहरु रचनाहरु र प्रभावकारी निर्माण प्रविधीहरु बुझ्न मदत गर्न सक्छन् । समुदाय हरु लाई स्थानीय खतरहरुको, क्षेत्रको अवस्था र भौतिक उपलब्धता को बारेमा थाहा हुनेछ। तिनीहरू स्थानीय निर्माण अभ्यासहरू सबै भन्दा राम्रो सँग बुज्दछन् । सबै दलहरु ले एक आपसबाट सिक्न आवश्यक: परियोजना कार्यान्वयनकर्ताहरु साङ्केतिक सहभागिता बाट जोगिन पर्छ, र विद्यालय समुदायहरुलाई व्यापक विद्यालय सुरक्षामा पूर्ण भागीदार हुन सशक्त बनाइनु पर्छ।
३ प्राविधिक निरीक्षण सुनिश्चित गर्नुहोस्
सफल सुरक्षित विद्यालय निर्माण ले समुदाय को क्षमता बढ्छ। स्थानीय निर्माणकर्ता हरु नयाँ प्राविधिक सीप सिक्न सक्छन् , जबकि प्राविधिक विशेषज्ञहरु ले अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ। परियोजना कार्यान्वयनकर्ताहरु ले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि रचना र निर्माण सुरक्षित (जोखिम प्रतिरोधक) निर्माण को लागि राम्रो अभ्यास अनुपालन छ । जहाँ स्थानीय सीप कम छन्, परियोजना कार्यान्वयनकर्ताहरु ले समुदाय लाई बाह्य विशेषज्ञहरु संग जोडेर क्षमता वृद्धि गर्नु पर्दछ।
४ स्थानीय ज्ञान मा निर्माण
सुरक्षित विद्यालय निर्माण स्थानीय ज्ञान मा निर्माण गर्नुपर्छ, यसलाई बदल्न हैन । स्थल चयन, रचना र निर्माण गर्दा स्थानीय अभ्यास गर्नुपर्छ, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मध्यम परिवर्तन पालना गर्नुपर्छ । यसले समुदायहरु द्वारा राम्रो अभ्यासहरू अनुकरण गरेको सुनिश्चित गर्दछ र तिनीहरूलाई अरू लागू गर्न सकिन्छ।
५ क्षमता विकास र आजीविका को प्रबलता
सुरक्षित विद्यालय निर्माण ले नयाँ कौशल को लागि एक महत्वपूर्ण तालिम आधार प्रदान गर्दछ। परियोजनाहरु ले स्थानीय निर्माणकर्ता को प्रशिक्षणको समर्थन गर्नु पर्दछ, जस लाई सुरक्षित निर्माण प्रविधी सिक्नु जरूरत छ । एकपटक प्रशिक्षित भए पछि , यी निर्माणकर्ता हरु उनीहरूको नयाँ कौशल बजारीकरण गर्न सक्छन्। सुरक्षित विद्यालय परियोजनाहरू ले सुरक्षित रचना र निर्माण को निरीक्षण गर्न स्थानीय सरकारका प्राविधिक कर्मचारी को कौशलताहरुमा सुधार गर्न सक्छ। उनीहरु को – ठूलो र सानो – सबै परियोजनाहरु मा आफ्नो संलग्नता ले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण मा चासो बनाउन सक्छ। यसले राष्ट्रिय सरकार लाई सबै समुदायहरूलाई सुरक्षित विद्यालय प्रदान गर्न आफ्नो दायित्व पूरा गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छ।
प्रभाव बढाउनका निम्ति राम्रा अभ्यासहरू
१. सुरक्षा को संस्कृति समर्थन लाई गर्नुहोस्
सुरक्षित विद्यालय निर्माण परियोजनाहरू ले खतरहरुको र जोखिम न्यूनीकरण बारे समुदाय प्रति जागरूकता वृद्धि गर्दछ । निर्माण पछि विद्यालय विपत्ती व्यवस्थापन समितिहरु को स्थापना र सुरक्षा को जोखिम को कमी को पाठ्यक्रम शुरू गर्दा समुदाय लाई सुरक्षा को संस्कृति विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्दछ।
२. व्यापक जिम्मेदारी लाई बढावा दिनुस्
सुरक्षित स्कूल निर्माण मा संलग्न परियोजना कार्यान्वयनकर्ता हरु ले समान स्तर र प्रक्रियाहरू विकास गर्नुपर्छ। यसले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण को सफल पक्षहरू फैलाउन मद्दत गर्दछ । उनीहरु ले सुरक्षित विद्यालयहरु को लागि एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि बनाउन सक्छन् र उनीहरुको मापन योग्य लक्ष्यहरु प्रति को प्रगति को हिसाब गर्न सक्छन्।